Cricket Zimbabwe matches postponed due to lack of preparation? – ZiFM Stereo | ZiFM Stereo
Home/News/Cricket Zimbabwe matches postponed due to lack of preparation? – ZiFM Stereo
Cricket Zimbabwe matches postponed due to lack of preparation? – ZiFM Stereo
Cricket Zimbabwe tour of Afghanistan next month – earmarked for Oman – is set to be postponed due to a lack of preparation for Zimbabwe’s players after a recent surge in Covid-19 cases in the southern African country.
Courtesy of resources.pulse.icc-cricket.com
During negotiations, ZC had put forward a proposal to host Afghanistan in a bio-secure bubble, which will be used when Pakistan tour Zimbabwe in April for Tests and T20 series